Playa de Aro, iray amin'ireo tanàna tsara indrindra eto Costa Brava | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | | Toerana fitsangatsanganana, España
Playa de Aro dia tanàna Girona tsara tarehy izay eo afovoan'ny Costa brava. Tanàna fanjonoana izy io tamin'ny voalohany ary nanomboka nampiroborobo ny fizahan-tany rehefa Fianakaviana ensensa nikasa ny hanangana trano fonenana ankehitriny S'Agaro, nanambara fa fananana tombony ara-kolontsaina tamin'ny 1995.
Ny morontsiraka tsara tarehy, ny lalana amoron-tsiraka izay manamorona ny morontsiraka ary manome anao fomba fijery mahafinaritra momba ny Mediteraneana sy ny sakafo matsiro dia zavatra sasany izay omen'ny Playa de Haro anao. Te hihaona aminy miaraka aminay ve ianao?
1 Inona no jerena ao Playa de Aro
1.2 Ny Cavall Bernat, mariky ny Playa de Aro
1.3 Lapan'i Benedormiens
1.6 Lalan'i Ronda
2 Inona no hohanina ao Playa de Aro
3 Rahoviana no tsara kokoa ny mandeha any Playa de Aro
4 Ahoana ny fomba hahatongavana any Playa de Aro
Inona no jerena ao Playa de Aro
Ny tanàna Catalan dia mandrafitra ny kaominin'i Castle-Playa de Aro eo akaikin'ny S'Agaró voalaza etsy ambony ary Castell de Aro. Any amin'ny Ambohitra Ampurdán, no misy azy Palamos y San Feliu de Guixols, ary ny tena manintona azy dia voajanahary.
Ny faritra fasika tena zava-dehibe ao Playa de Aro no antsoina Morontsiraka mahafinaritra, efa ho roa kilometatra sy sasany ny halavany ary misy ny sokajy sainam-pirenena. Saingy, raha tianao ny toerana akaiky kokoa handro amin'ny ranomasina dia azonao izany Cala del Pi, izay tehirizina saika ala.
Etsy ankilany, any S'Agaró dia manana ny moron-dranomasin'i San Pol y Sa Conca, nampitain'ny iray amin'ireo làlana amoron-dranomasina izay noresahintsika teo aloha ary samy manana saina manga koa isika. Ny iray amin'ireo faritra feno fasika ireo dia hahatonga anao hankafy milomano mahafinaritra any amin'ny Ranomasina Mediterane.
Ny Cavall Bernat, mariky ny Playa de Aro
Ny Cavall Bernat dia monolita goavambe manodidina ny fito metatra ny haavony izay eo amin'ny faran'ny Great Beach. Inoana fa an'ny Neolithic ary tsy izy irery no arkeolojika sisa tavela ao amin'ilay faritra.
Azonao atao ny mahita izany ao amin'ny Castell de Aro ary namboarina tamin'ny vanim-potoana antenantenany, indrindra teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Ny atitany dia alaina amin'ny alàlan'ny valin'ny barika mampametraka ary, noho ny famerenana amin'ny laoniny isan-karazany, dia ao anatin'ny toe-javatra lavorary izy io. Manana ny fandinihana ny tsara tombontsoa ara-kolontsaina.
Raha mitsidika an'i Castell de Aro ianao, dia tsy hadinonao io tranombakoka mahaliana mampiseho io Saribakoly arivo eo ho eo fahatongavana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Namboarina tamin'ny fitaovana isan-karazany indrindra toy ny volon'ondry, ivoara ary koa ny tandrok'ireo biby. Ny tranainy indrindra, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, dia eo amin'ny rihana voalohany. Ho hitanao eo akaikin'ny trano mimanda voalaza etsy ambony ny tranombakoka.
Amin'ny ankapobeny, ny zavatra manintona lehibe indrindra ao amin'io faritra io dia ny Fananganana tanàn-dehibe S'Agaró. Ny fianakavian'i Ensensa no fananganana azy, araka ny nambarantsika fa asan'ny mpanao mari-trano Rafael Masó i Valentí.
Ny fitambarana sarotra dia mamaly ny fomba noucentista. Na ireo tranobe namboarina taty aoriana aza dia nanaja azy io. Noho izany, mamaly ny foto-kevitry ny zaridaina City, izany hoe amin'ny hevitra fanakambanana chalet sy faritra maintso. Ilay voalohany koa dia mampiseho ny fitaoman'ireo trano fiompiana Katalàna. Anisan'ireo trano, singa toa ny Senya Blanca, ny hostal de la Gavina ary ny Fiangonana manantena. Amin'izao fotoana izao dia ny firenena iray manontolo no mahaliana ny firenena.
Hetsika iray hafa izay tsy azonao adino amin'ny fitsidihanao an'i Playa de Aro dia ny fitsangantsanganana amin'ny lalan'ny morontsiraka. Mandehandeha, eo anelanelan'ny hantsam-bato, faritra tsara ao Costa Brava izy ireo. Ny fiandohany dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, izay namboarina ho an'ny mpiambina sivily hanara-maso ny fanondranana an-tsokosoko an-dranomasina.
Fa amin'izao fotoana izao dia mamorona làlana fizahan-tany manolotra anao izy ireo fomba fijery mahafinaritra an'i Costa Brava, miaraka amin'ireo hantsam-bato sy ireo zana-boriboriny madinidinika. Ny iray amin'ireo tsara tarehy indrindra dia ilay mampifandray an'i Playa de Aro amin'i Palamós amin'ny alàlan'ny tontolo mahavariana.
Inona no hohanina ao Playa de Aro
Amin'ny maha tanàna amoron-tsiraka azy, ny akora fototra ho an'ny sakafo Playa de Aro dia trondro sy akorandriaka anisan'izany ny udila avy any Palamós. Na izany aza, ny vokatra an-tendrombohitra toy ny akoho na legioma dia be mpampiasa koa.
Anisan'ireo lovia mahazatra miavaka ny esqueixada, izay manana flakes cod, tongolo, peppers, voatabia ary oliva mainty. Salady matsiro izy io. ny Salady dipoavatra natsatsika, izay vita amin'ny legioma natsatsika ary, indraindray, manana teris, tsara tarehy ao amin'ilay faritra.
Fa ny iray amin'ireo sainam-piandohan'ny gastronomie an'ny Costa Brava dia ny tranom-borona, lasopy izay mazàna amboarina miaraka amin'ny moanina sy udd. Ny malaza koa dia ny lovia vary, anisan'izany ny vary mainty, izay manana sotasota, mololo ary, mazava ho azy, ny ranon-dranomainty manome ny anarany.
Mikasika ny tsindrin-tsakafo, mahazatra an'ny Gerona rehetra ny susos, mofomamy sasany feno crème. Ary koa ny Tarte Tatin, an'ny mofomamy fohy, paoma ary crème.
Rahoviana no tsara kokoa ny mandeha any Playa de Aro
Ny tanànan'ny Girona dia manana toetrandro malefaka mandavantaona. Mangatsiaka ny ririnina, miaraka amin'ny maripana antonony manodidina ny efatra ambin'ny folo degre, raha mafana kosa ny fahavaratra, manodidina ny dimy ambin'ny folo degre eo ho eo. Etsy andaniny, tsy orana loatra izy ary ny tahan'ny rotsak'orana dia ambony indrindra amin'ny volana novambra.
Noho izany, ny vanim-potoana rehetra dia tsara ho anao ny mitsidika an'i Playa de Aro. Na izany aza, amin'ny fahavaratra dia betsaka ny mpizahatany, ka mety tsara kokoa ny miditra Primavera.
Ahoana ny fomba hahatongavana any Playa de Aro
Ny seranam-piaramanidina akaiky indrindra ny tanàna dia Gerona, izay ao Viloví de Oñar ary sahabo ho telopolo kilaometatra eo ho eo io. Mba hahatongavana any Playa de Aro amin'ny làlana, dia manana ny làlambe ianao AP-7, izay manaraka an'i Costa Brava iray manontolo. Avy amin'izany, tsy maintsy mivoaka amin'ny C-65, izay mitondra anao mivantana any amin'izay alehanao.
Raha tsy te handray ny fiaranao ianao dia manana tsipika fitobiana samy avy any Gerona na avy Barcelona hatrany Playa de Aro. Azonao atao koa ny mampiasa ny lalamby. Fa ny gara akaiky indrindra dia Caldes de Malavella, izay manodidina ny roapolo kilometatra miala ny tanànan'ny Costa Brava.
Ho famaranana, Playa de Aro dia toerana mahafinaritra ho an'ny fialan-tsasatrao. Izy io dia manana morontsiraka sy lava-bato mahafinaritra, tontolon'ny nofinofy, lova lehibe ary sakafo mahasalama, izay nofanin'ny hotely tsara. Sahy mitsidika azy io ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Aro Beach